Zavatra tsy mitovy amin'ny resahana tsotra (sy ny zava-misy hoe "Tokony ho fahafinaretana") ao amin'ny NAB New York - Vaovao NAB Show avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Zavatra tsy mitovy amin'ny resahana tsotra (sy ny zava-misy hoe "Tokony ho fahafinaretana izany") ao amin'ny NAB New York
Zavatra tsy mitovy amin'ny resahana tsotra (sy ny zava-misy hoe "Tokony ho fahafinaretana izany") ao amin'ny NAB New York
Hiditra amin'ny solontenan'ny Charter Communications sy Hewlett Packard Enterprise ny mpanorina ny masoivoho doka vaovao any New York amin'ny resaka momba ireo andiana masoivoho vaovao izay miova amin'ny marketing.
TONTOLO VAOVAO YORK: Ny Tommy Henvey sy Lehiben'ny Fanatanjahantena Tti Henrellell dia samy handray anjara amin'ny fifanakalozan-dresaka manokana hamelabelarana fomba vaovao hananganana ny dokam-barotra mifototra amin'ny fahatsorana sy fahatokisana Kat Show New York. Henvey sy McConnell dia hiaraka amin'ny Talen'ny Senior Marketing momba ny marketing sy ny famoronana Claire Avery sy ny mpitarika ny marika Marissa Freeman, Marissa Freeman, ao amin'ny fivoriana iray mitondra ny lohateny hoe "Hevitra tokony hifalifaly izany", natolotry ny Adweek Creative sy ny Mpanatanteraka fanavaozana David Griner. Ny fivoriana ny alakamisy 08 oktobra amin'ny 17: 2 tolakandro ao amin'ny Javits Centre (Stage 2).
Ireo izay maniry hanatrika ity hetsika ity dia afaka manao izany maimaimpoana amin'ny alàlan'ny fampidirana ny kaody EP06 rehefa misoratra anarana Kat Show New York.
Olana lehibe ny asa. Ny valiny vokarinao ho an'ny mpanjifanao dia zava-dehibe. Fa ity no zavatra, ny fomba hahatongavanao any ho zava-dehibe kokoa. Zavatra tsy mitovy dia iray amin'ireo karazam-borona vaovao momba ny serivisy feno, izay naorina tsy vitan'ny hoe mandefa hafatra mahery vaika, mandresy lahatra, fa amin'ny fomba tsara kokoa. Amin'ity fotoam-pivoriana ity, ny mpanorina ny masoivoho dia hiaraka amin'ny solontenan'ny Charter Communications sy Hewlett Packard Enterprise ho resadresaka momba ny fomba mahafaly ny olona sambatra sy ny mpanjifa sambatra. Hanampy ny fahitan'izy ireo ny fomba namelonany tontolo iray izay ananan'ny rehetra ny fizotran'izany, mirehareha ny rehetra fa manao izay ataony, ary faly aza izy ireo momba izay ataony.
Tommy Henvey dia mitondra traikefa efa roapolo taona, tamin'ny naha-talen'ny famoronana mpanatanteraka tao amin'ny McGarry Bowen sy Ogilvy, talen'ny vondrona famoronana ao amin'ny Y&R ary ny talen'ny famoronana ao amin'ny BBDO. Izy dia niasa manerana ny mpanjifa: FedEx, Doritos, Mt. Dew, Pepsi, Lincoln, Verizon, Century 21, Bank of Citizens, Thomson Reuters, Kool Aid, NASCAR ary tariby Time Warner hanome anarana vitsivitsy. Mpamorona voaravaka izy, rehefa nahazo AICP, ANDY, Fetiben'ny sarimihetsika Cannes, Clio, Effie, Emmy, New York Festival ary mari-pankasitrahana One Show. Tiany izay ataony nefa aleony mbola mijanona kely fotsiny ho an'ny Yankees, na dia mihena izany aza ny firongony.
Patti McConnell nandany nandritra ny roapolo taona mahery niarahana amin'ireo marika malaza eran-tany sy orinasa manerantany. Ny asany dia nahitana ny fitsangatsanganana tany Ogilvy & Mather, izay niasa tamin'ny naha-Tale Jeneralin'ny Production NA sy Mpanamboatra Executive ho an'ny American Express, Coca-Cola, Kraft Foods ary Time Warner Cable, ho fanamarihana vitsivitsy. I Patti koa dia nitondra ny efitrefitra tao amin'ny BBDO sy ny JWT. Ny asany dia nekena tamin'ny AICP, ANDY, Cannes Film Festival, Clios, Effies, Emmys, New York Festival ary loka A Show.
Claire Avery dia marika tanteraka sy mpanamboatra marika. Nanomboka tao amin'ny Charter Communications tao 2007 izy ary nidina haingana tamin'ny laharana, ka nahazo loka maro sy Mark Faxie maro be teny an-dalana. Talohan'ny Charter, dia tao amin'ny ekipan'ny varotra famoronana ao amin'ny AOL izy. Mpikambana ao amin'ny Kolejy Sweet Briar izy.
Marissa Freeman Nosoratan'ny lohalaharana eran'izao tontolo izao ny marika orinasa HPE vaovao, nekena ho toy ny fidirana vaovao farany ambony indrindra isaky ny Best Brands Interbrand. Miandraikitra ny varotra marika eran'izao tontolo izao izy ireo, dokam-barotra, fampahalalam-baovao, fiaraha-miasa amin'ny votoaty, fanohanana ary fanandramana marika. Talohan'ny HPE, i Freeman dia nitana toerana mpanatanteraka tao amin'ny BBDO, DDB ary Deutsch LA. Ny asany tao amin'ny DIRECTV tao amin'ny Deutsch LA no nitondra azy tany amin'ny Time Warner Cable ho toy ny tetik'ady SVP Brand. Izy no mpandray ny AMA Marketer of the Year Award ary vao haingana no nomena anarana iray an'ny Brand Innovators 'Top 100 Women in Brand Marketing. Nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversite any Montclair State izy ary nanao lahateny tany amin'ny Columbia Business School ary New York University.
David Griner nandrakotra ny haavony sy ny fahaiza-mamorona ho an'i Adweek nandritra ny 12 taona. Izy no miandraikitra ny ekipa mandrakotra ny fanentanana, fananganana vokatra, teknolojia mipoitra, masoivoho ary consultanc. Izy no mpamorona ny malaza #AdweekChat natao isaky ny Alarobia teo tao amin'ny Twitter ary nampiantrano ny podcast Adweek hoe "Yeah, Izay angamba no Ad", nomena ny podcast 2018 tsara indrindra nataon'ny Folio Awards ny 2018. Ao amin'ny XNUMX, dia nantsoina hoe Mpanao Gazety amin'ny taona nataon'ny fikambanana matihanina anglisy any Women any Marketing.
Zavatra tsy mitovy ny any Brooklyn, New York. Raha mila fanazavana bebe kokoa, antsoy ny 929-324-3030 na tsidiho www.itssomethingdifferent.com
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News dokam-barotra Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana Kat 2015 Kat 2016 NAB New York Kat Show Kat Show 2016 Kat fampisehoana Careers Las Vegas Kat Show Kat Show Registration NAB16 nabshow National Association ny ireo fahitalavitra Show Post Production World	2019-10-09
Previous: Ny CCTV dia mandeha ao amin'ny hazakazaka amin'ny sambo Dragon miaraka amin'ny Lectrosonics nomerika Hybrid Wireless
Next: Ho an'ny tena manokana sy mombamomba azy: Eran Stern